प्रदेश १ मा सत्ता पक्षले प्रदेश सभा बैठक नै बहिष्कार गर्याे ! « Bagmati Online
प्रदेश १ मा सत्ता पक्षले प्रदेश सभा बैठक नै बहिष्कार गर्याे !
विराटनगर, ९ माघ । प्रदेश नम्बर १ को प्रदेशसभा बैठक सत्तारुढ पक्षले नै सञ्चालन गर्न नदिने भएका छन् । मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नदिनका लागि बैठक अवरोध गर्ने योजना रहेको पाइएको हो ।
यसअघि माघ २५ गतेको बैठकमा अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची रहेकोमा मुख्यमन्त्री निकट प्रदेशसभा सदस्यहरुले नै बैठक अबरुद्ध गरेका थिए । सरकार समर्थक सांसदहरुबाट संसद बैठक अबरुद्ध हुदै आएको छ, भने माघ २५ गतेको बैठक पनि सत्तारुढ दलकै सांसदहरुको बिरोधका कारण स्थगित भएको थियो ।
आज (आइतबार) २ बजेको लागि तय भएको बैठकमा अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्री र सरकार पक्षीय प्रदेशसभा सदस्यहरुको उपस्थित छैनन् । अविस्वास प्रस्ताव खारेज नभए बैठक चल्न नदिने भन्दै आएका सरकार पक्षले नै बैठक बस्न नमानेको बुझिएको छ ।
सत्तारुढ पक्षका सांसदहरुले निलम्बनमा परेका १६ जना सांसदहरुलाई बैठकमा प्रबेश गर्न नदिने र संसदीय गतिविधिहरूमा भाग लिन नपाउने भनेर संसद अबरोध गर्दै आएका छन् । सत्तापक्ष सांसद र मन्त्रीहरु नआए बैठक के गर्ने ? भन्ने बिषयमा छलफल भइरहेको प्रदेश सभामा सचिवालयले जनाएको छ ।